Kitra – «Telma coupe de Mada» : ekipan’Analamanga 7 tafita amin’ny 1/8-n-dalana | NewsMada
Kitra – «Telma coupe de Mada» : ekipan’Analamanga 7 tafita amin’ny 1/8-n-dalana
Tontosa ny faran’ny herinandro lasa teo, ny dingan’ny ampaha-16-n-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, taranja baolina kitra «Telma coupe de Mada». Saika tafavoaka avokoa ireo ekipa sangany, afa-tsy ny Ajesaia, tompondakan’i Bongolava izay resin’ny FC Rabaza avy any Atsimo atsinanana, tamin’ny isa 1 no ho 0.
Hatreto, mbola misongadina Analamanga, izay mbola manana solotena fito, tafita any amin’ny ampaha-16-n-dalana. Anisan’ireny ny Tana Formation, izay nanamontsana ny FCA Avaradroa Alaotra Mangoro, tamin’ny isa mavesatra 6 no ho 1. Toy izany koa ny AS Adema, nanilika ny FCB Matsiatra Ambony, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 0.
Ny Cosfa, nandresy ny Racing Nelly Boeny, tao amin’ny kianja filalaovany, tamin’ny isa 3 no ho 1. Mbola tamin’io isa io ihany koa ny nanilihan’ny Cnaps Sport Analamanga ny Fisakana FC Amoron’i Mania. Sahirana kosa vao nahazo fandresena ny Elgeco Plus, raha nifanandrina tamin’ny MI 20 Analamanga ihany. Tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 ny isa nisarahan’ny roa tonta.
Efa tany amin’ny fanalavam-potoana kosa vao tafavoaka ny Uscafoot sy ny Mama FC. Ny ekipan’ny kaominina izay nandresy ny Enac Boeny, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 ary tamin’io isa io ihany koa ny nanilihan’ny tranom-piantohana, ny Fifafifi Atsinanana. Hiato aloha ny fihaonana ary hiditra amin’ny 1/8-n-dalana, ireo ekipa rehetra tafakatra.